၂၀၁၂-၁၄၃၀=၅၈၂နှစ် တိုင်ခဲ့ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Islam » ၂၀၁၂-၁၄၃၀=၅၈၂နှစ် တိုင်ခဲ့ပြီ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jun 14, 2012 in Islam, Science & Religion | 10 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်လူမျိုးမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမရှိပါလို့ပြောနေသူများ သမိုင်းကို
ပြန်ဖတ်စေလိုပါကြောင်း လောလောဆယ်တွေ့ မိသော စာပေဗိမ္မာန်ထုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှအကြောင်း
အရာများကို မြန်မာဝီကီ မှကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကို မသိလျှင် မပြောတာကောင်းပါလိမ့်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၈၂)နှစ်လောက်ကပင်ရှိနှင့် နေခဲ့သည်ကို ယခုမှ မရှိဟုငြင်း၍မရတန်ရာ၊စဉ်းစား
ကမန်လူမျိုးသည်လည်း ရခိုင်လူမျိုးစုဝင်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးစုကြီးထဲတွင် ရခိုင်၊ ကမန်၊ ခမွီး၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီး၊ မြို၊ သက် စသည့်မျိုးနွယ်စုများ အကျုံးဝင်ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ရှိရပေသည်။ ““ ကမန် ”” တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အခြေပြုမှီတင်းနေထိုင်ကြသော မျိုးနွယ်စုများအနက် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော တိုင်း၇င်းသားမျိုးနွယ်စု (၁၃၅) စုတွင် တစ်စုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။
၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင် လက်ထက် ရခိုင် ဘုရင့် နိုင်ငံတော် ကို ဗမာ ဘုရင် သိမ်းပိုက် သဖြင့် ရခိုင် ဘုရင် မင်းစောမွန် သည် ဘင်္ဂလား ဒေသရှိ ဂေါလ်ဒေသ သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ် ဆူလတန် ဘုရင်က ကောင်း မွန်စွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလား ဂေါလ် ဆူလတန် ဘုရင် ၏ အကူအညီ ဖြင့် ရခိုင် ထီးနန်း ကို အရ ယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင် မြောက်ဦးမြို့တည်၍ မြောက်ဦးခေတ် ကို စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦးခေတ် တွင် ရခိုင့် တပ်မတော်၌ အာရပ် မှစစ်သည် တော်များ၊ ဥရောပ မှ ပေါ်တူဂီများ နှင့် ဂျပန် တို့ပါအမှုတော် ထမ်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ သည်။ ယင်းအာရပ် မှစစ်သည်တော် မျိုးဆက် အများစုမှာ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း နှင့် မြောက်ဦးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်း တို့ကို ရခိုင် တို့က ကမန် ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ရခိုင်ပြည် ၌ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ မပျောက်မပျက်စေရန် မိသားစုအနည်းငယ်မျှသာရှိသော မျိုးနွယ်စုမှစ၍ထိန်းသိမ်းဖော်ထုတ်ကာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများစွာပါဝင်သော နိုင်ငံတော်ကြီးကို စုစည်းခိုင်မာစေသည်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့မှာလည်း ““ ကမန် ”” အမျိုးသားများ၏ ပကတိမှန်ကန်သော သမိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်စောင်ကို ကမန်အမျိုးသားများနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ လွယ်လင့်တကူသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် နောင်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာအတွက် လိုအပ်ပါက အထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ် သုံးစွဲတင်ပြနိုင်ရန် ဤသမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်စောင်ကို ပြုစုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း စသည့် တိုင်းရင်းသား အများစုများမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူများရှိသကဲ့သို့ တိုင်ရင်းသားစစ်စစ်များထဲမှ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူများ ရှိသေးကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်လိုရင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ရာဇ၀င်ထဲမှ ကမန်သမိုင်းကိုလေ့လာလျှင် ကမန်သည်အိမ်နီးနားချင်းဆက်စပ်နေသောနိုင်ငံ တစ်ခု၏ လူမျိုးတစ်မျိုးမှပေါက်ဖွားလာသော မျိုးနွယ်စုတစ်မျိုးမဟုတ် ““ မည်သည့်အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်မှ ကမန်ဟူသော အမည်ဖြင့် လူမျိုးများနေထိုင်ကြကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများ လုံးဝမရှိပါပေ””။ ကမန်မျိုးနွယ်စုသည် ရခိုင်လူမျိုးစုကြီးထဲတွင် အထင်အရှားပါဝင်နေပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ် မည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံများတွင်မျှ ကမန်လူမျိုးစုနှင့်မျိုးနွယ်တူ တိုင်းတစ်ပါးသားကျောထောက်နောက်ခံလူမျိုးဟူ၍ လုံးဝမရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဖွားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် မည်ကဲ့သို့သော အခက်အခဲများ ကြုံကြိုက်ခဲ့ပါစေ၊ တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံများသို့ လူမျိုးစုအလိုက် ထွက်ပြေးတမ်းရှောင်ခြင်း၊ တိုင်းတစ်ပါးအားကိုး အားထာပြုခြင်းများလည်း မရှိဖူးပါချေ။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းပင် ဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကမန်များမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းကြပြီး မြန်မာပြည်အတွင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်စုဖြစ်သည်။ အမေကျော် ဒွေးဒေါ်လွမ်းစရာ နိုင်ငံရပ်ခြားသံယောဇဉ် တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါချေ။ ကမန်မျိုးနွယ်စုသည် ရခိုင်ဘုရင့်တပ်မတော် ““ လေးသည်တော် ”” တပ်ကို အစွဲပြုရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ဘုရင့်တပ်မတော်၏ အမည်နာမကိုအကြောင်းပြုသော လူမျိုးစုတစ်စုသာဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ကမန်သည် ရခိုင်ထဲမှ ရခိုင်များသာဖြစ်ကြသည်ဆိုသည့် အကြောင်းအချင်းရာကိုမမှန်ကန်ကြောင်း ငြင်းချက်ထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အချုပ်ဆိုရသော် ကမန်အမျိုးသာများသည် ရခိုင်နွယ်ဖွားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ထာဝစဉ်တိုးတက်သာယာရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးတို့တွင် ကျရာဂကဏ္ဍမှ ကျရာတာဝန်များကို ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
““ ကမန်လူမျိုးများထဲမှ ထင်ရှားကျော်ကြားမြန်မာမွတ်စလင်များ””
(၁)ဦးထွန်းစိန် (ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ )
(၂)ဘရှင် (၁၉၂၀ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ကို ဦးဆောင်သူ တက္ကသိုလ် (၃)ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီး ၁၁ ဦးတွင်ပါဝင်သူ)
(၇)ဟိုက်ကုတ်တရားသူကြီး ဦးစီဘူး ( ၁၉ ဇူလိုင် နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကို
စစ်ဆေးစီရင်သော တရားရေးအဖွဲ့ဝင်)၊(ကျနော် အဘေး)
(၈)အိုင်စီအက်(စ်) ဦးကျော်သိန်း (အတွင်းဝန်ဟောင်း)
(၉)ဗိုလ်မှူးထွန်းမြိုင် (တပ်မတော် ဒုလက်ထောက်စစ်ရေးချုပ် ငြိမ်း)
(၁၀)ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်စော (လေ) (သူရ နှစ်ထပ်ကွမ်း)၊
(၁၂)ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဖေ (တပ်မတော် ဒုတိယ စစ်ဥပဒေချုပ် ငြိမ်း)
(၁၃)ဗိုလ်မှူးဘိုးဖြူ (တပ်မတော် ရေ)
(၁၄)ရှေ.နေကြီး ဦးဖိုးခိုင် (ပါလီမန် အမတ်)
(၁၆)ဒေါက်တာရီရီ (သီရိပျံချီဦးဘစိန် ၏ သမီး)
(၁၇)ဒေါ်အေးညွန့် (ပါလီမန်အမတ် ၊ ရှေ.နေကြီး ဦးဖိုးခိုင်၏ သမီး )
(၁၈)ပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင် (ဓာတုဗေဒပါမောက္ခ )
(၁၉)အတွင်းဝန် ဦးအုန်းခင် (တရားရေးဝန်ကြီးဌာန)
(၂၀)ဦးသာညွန့် (ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး)၊
(၂၁)ဆရာကြီး ဦးမောင်တင် (တိုင်းပညာဝန်)
(၂၂)အမျိုးသားကျောင်းဆရာကြီး ဦးညိုဘူး (ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ၊လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေး လုပ်ငန်းဌာန)
မှတ်သားသွားပါတယ် ကိုနာဂရေ။ ဗဟုသုတလဲ ဖြစ်စေတာမို့ကျေးဇူးပါ။
ပြည်ထောင်စုအရေးမှာ သွေးချင်းတွေ ရတက်အေးအောင်
ကျနော်တို့ လက်တွဲထားကြပါစို့ ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ..
ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေ ကိုးကွယ်မှုဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတာယုံကြည်ပါတယ်
ကမန် ဟာ ရခိုင်လူမျိုးစု တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူများ ဖြစ်တာလည်း လက်ခံပါတယ်
ခု ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်အရေးက လူမျိုးခြား နိုင်ငံမဲ့ တွေက ကျနော်တို့ နယ်ပယ်ကို စော်စော်ကားကား လာလုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ
ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘဲနေနေ လူတိုင်းလူတိုင်း တိုင်းပြည်တိုင်း တိုင်းပြည်တိုင်း
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ အကြမ်းဖက်ခြင်းပြုသူတွေကို မလိုလားတာပါ သားဦး၊မြေးဦးရေ—-။
ကမန် နဲ့ ရိုဟင်ဂျာက အတူတူတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်…
@မိုးတိမ်ရေ. ကမန်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။သို့ သော် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ရောညှပ်အထောင်း
ခံနေရပါတယ်။တကယ်တေ့ ကမန်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးအစ္စလာမ်တွေလို့ ရှင်းပြချင်တဲ့ဆန္ဒပါ။
@ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားသူတွေဆိုတာ ကျနော်နဲ့ အတူထပ်တူခံစားမယ်ထင်ပါတယ် ကိုခင်ခရေ။
@mayflowers ရေ ဗဟုသုတအတွက်ဖြစ်စေတယ်ကြားရလို့ ကျေးဇူးပါနော်
@ကိုရွာစားကျော် ကွန်မန့် လေးနဲ့ အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ကျနော့်အဘေး က အမေဖက်က တော်စပ်တာပါဗျာ။
အော်…..ကိုသားဦးရေ..အကို့ရဲ.ရပ်တည်ချက်ကိုလေးစားပါတယ်… ကျနော်ကမန်းဂဇက်ကိုဖတ်ပဲဖတ်တဲ.မန်ဘာပါ…စတည်ထောင်တည်းကဆိုပါတော့… ဒီတခါအရေးအခင်းမှာသိလိုက်ရတာက… ကျနော်တို့လို့.. မြန်မာစစ်စစ်နဲ. အရှေ့အလယ်ပိုင်းသားမွတ်ဆလင်တွေက မွေးဖွားလာတဲ. သူတို့အခေါ် (ကုလား ဖြူ)တွေလဲ ရောထောင်းခံလိုက်ရပါလားဆိုတာပါ…
boderline မှာဖြစ်ခဲ့တဲ.ရိုဟင်ဂျာဂရက်က ကျနော်တို့ကိုတော်တော်လေးကျီးလန့်စာစားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
ကျနော်တို့က ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င် မြန်မာ.ပြည်တွင်းရေးကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတဲ.သူအားလုံးနဲ. လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြား…. အားလုံး ကိုမုန်းမယ်ဆိုတဲ. သူဘယ်သူ့ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ရှုံချပါတယ်ဆိုတာကို NLD အဖွဲ.၀င်တယောက်အနေနဲ.ရော… မြန်မာပြည်ဖွား…. မြန်မာပြည်မှာ နှစ် ၄၀၀ ခန့်နေထိုင်ခဲ.တဲ. ကျနော့်ရဲ.ဘိုးဘေး မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင်များ ကိုယ်စားပြောချင်ပါတယ်…
ကျနော် … နိုင်ငံရပ်ခြားမှာကျောင်းတက်နေတဲ. မြန်မာပြည်ဖွား ayeyarwaddy တိုင်းသားနှင့်ရန်ကုန်ဇာတိမိဘတွေကမွေးဖွားလာတဲ. အသက် ၂၁နှစ် အရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးပါ…. ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်… ကိုသားဦး ရေ… နောက်လဲ ကွန်မန့်တွေနဲ.ပိုစ့်တွေကိုစောင့်ဖတ်ပါဦးမည်…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် memeseku ရေ။အားပေးနေမယ်ကြားရလို့ အားရဝမ်းသာရပါတယ်။